संवाद ओलि बा संग
नामुद युट्युबे र फेसबुके पत्रकार भष्मासुरले नेपालको हालको प्रधानमन्त्रीसंग लिएको अन्तर्वातालाइ तल प्रस्तुत गरीएको छ
भष्मेः नमस्कार म हजुर हरू कै प्यारो भष्मे र आज मसंग हुनुहुन्छ नेपालका प्रधानमन्त्री ओलि बा । उहाँ नामुद हास्यकलाकार, पौडीबाज, सिकारी, खेलाडि इत्यादिका रूपमा पनि परिचित हुनुहुन्छ ।
स्वागत छ ओलि ज्यु तपाईलाई आजको यस अन्तर्वातामा ।
ओलि बाः धन्यबाद
भष्मेः	आज म जनताको प्रश्न र गुनासोहरू हजुर सामु प्रस्तुत गर्ने छु । आशा गर्दछु तपाईले जानताका उत्सुक्तालाई ध्यानमा राखेर यि प्रश्नहरू को जवाफ दिनु हुने छ ।
ओलि बाः अवश्य, म सक्दो संक्षिप्तमा, अर्थात चाहिने कुरा केहि नभनि, प्रश्नको उतर दिने प्रयास गर्ने छु ।
भष्मेः तपाईलाई अवगत नै छ, कोरोना भाईरसको त्रासमा पनि नेपालि युवाहरू सरकारको लाचारता, सुस्थता र अनियमितता विरूद्ध ‘Enough is Enough’ को नारा लिएर सडकमा उत्रिएका छन् । यसमा तपाई के प्रतिक्रिया दिन चाहानु हुन्छ ?
ओलि बाः नेपालका युवा भनेका नेपालका निकट भविष्य हुन् । यस्तो माहामारीको समयमा युवाहरू सडकमा उत्रिनु नेपालको भविष्य खतरामा पार्नु हो । यस्तो समयमा त आरामले घर बस्नु, हिमालसँग आईनपुग्दै चिसिएको हावा लिएर आफ्नो रोग प्रतिरोधात्मक शक्ति बढाउनु, (मनमनैः काठमाडौ जस्ता सहरको हावा दुषित भएको कुरा ननिकालोस यो पत्रकारले) जिरा झानेको दाल, बेसार हालेको तरकारी ( फेरी नेपालको तरकारी फ्यालेर , इन्डियाको विषादि युक्त तरकारी भित्राइएको छ भन्ला यसले, बुद्धि बिग्रिएर यसको कार्यक्रममा आएछु । ) खुरसानी र धनियाँ हालेको अचार टन्न खाएर कोरोनासंग लड्नु । कोरोना लाग्दै लाग्दैन नि । ( भाइरोलोजिमा वरिष्ठता हासिल गरेका वैज्ञानिक र कयौँ वर्षको अनुभव हासिल गरेका डाक्टरले भनेको कुरा त मतलब नै भएन नि)
भष्मेः अनि प्रधानमन्त्रि ज्यु, कोरोना टेष्ट गर्ने PCR मेसिन नै पर्याप्त मात्रामा नभएपछि बेसार खाएर कोरोना नलागेको कुरा कसरी थाहा पाउने नि ?
ओलि बाः तपाई मान्छे बाठो हुनुहुन्छ जस्तो लाग्थियो मलाई तर हैन रहेछ । PCR मेसिन पर्याप्त भयो भने त नेपालमा भएका सम्पुर्ण कोरोना संक्रमितको संख्या थाहा भइहाल्छ नि । वास्तवमा PCR मेसिन नेपालमा नभएको भए नेपालमा कोरोना नै आउदैन थियो ।
भष्मेः कोरोना लागेको पुष्टि नहुदैमा नेपालमा कोरोना छैन भन्न त मिल्दैन होला नि ? सयौको संख्यामा मान्छे मर्न थाले भने ?
ओलि बाः ए बाबा मैले कति चोटि भनिसके नेपालीहरूको रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बलियो छ के । अमेरीका, इटाली जस्ता बिकसीत मुलुकमा हजारौको संख्यामा संक्रमितहरूको मृत्यु भएको छ , नेपालमा हजार कटाउन सकिएको छैन । यहाँ WHO को राहात ल्याउनको निम्ति आत्महत्या गर्नेलाई पनि कोरोनालागेको पुष्टि गराउनु परेको छ । ( WHO को राहातको लागि म नै सुइकिए पनि कोरोना भन्दिन्छन् । हाच्छिउ गरेर कोरोना पचाइदिनु पर्छ भनेकोमा कति मेमे बन्ने होला)
भष्मेः मन्त्रि ज्यु , देशभरि गरिएको लकडाउन अहिले हालसालै केहि खुकुलो भए पनि कयौँ नेपालिलाई एक छाक निस्तो भात खान हम्मे हम्मे छ । टन्न खाएर कोरोनासंग कसरी लड्ने ?
ओलि बाः कसलाई छ एक छाक खान हम्मे हम्मे ? नेपाल भिखारी मुक्त देश भइसक्यो । अब कसैले पनि कचौरा, ताम्रो थापेर मागेर खान पर्दैन । म हिड्दा कहि पनि भिखारी देखदिन ।
भष्मेः (मनमनैः कालो सिसा भएको गाडि चढेर सवारी हुदा का देखिन्छ हौँ । यो समयमा आत्महत्याको घटना बढेको छ भनेर त जता ततै छ त । पत्रिका नपढेनि Twitter त चलाउछन् त बुढा । ) अनि मन्त्रि ज्यु, विभिन्न मन्दिरहरूमा त अझै पनि गाँस र बास को टुङ्गो नभएको मानिसहरूको भावविहोल गराउने दृश्य देखिन्छ त । अनि कसले भन्छ नेपाल भिखारी मुक्तदेश हो?
ओलि बाः भरखरै मैले भने त सुन्नु भएन ? बाटामा नदेखिए भएन ? अब भिखारी कता गएर बस्छन् सरकारलाई थाहा हुन्छ ? त्यहि पनि सरकारले राहातहरू बाढिरहेकै छ । ( अब फेरी बाजुरामा ३ किलो चामल दिएर ३० किलो बुझिलिएको रसिद बनाएको घट्ना को कुरा निक्लिने भयो , काण्ड पनि के के गर्न जानेको ? यसै कमेडि गर्न परेको हैन नि ।)
भष्मेः राहातको कुरा आउदा यो कोरोनाको समयमा खर्च भएको १० अर्बको हिसाब सरकारले कहिले दिन्छ ?
ओलि बाः (फेरी १० अर्बको कुरा, यो नेपालीहरूको बिर्सिने बानीलाई के भयो आझकाल ? निर्मला हत्याकाण्ड , डा. गोविन्द के सिसंग गरेको संझौता, कृष्ण बहादुर महराको काण्ड, गोकुल बास्कोटाको ७० करोड जसरी बिर्सिदिए हुने नि)
खालि १० अर्ब १० अर्ब , ए बाबा खर्चै भएको छैन का बाट देखाउनु ? कमिसन दिदा दिदै सकिहाल्यो नि । धन्न त्यो ५ वटा काम नलाग्ने PCR मेसिन भए पनि आएको छ। तर भष्टचार चै भएको छैन है । हाम्रो सरकार भष्टचार मुक्त छ ।
एउटा कुरा , खालि सरकारको विरोध मात्र किन गरिन्छ ? सरकारले गरेको राम्रो कामको तारिफ गर्न पर्दैन ? मैले पढ्ढा नेपालको नक्सामा लिम्पियाधुरा देखेको नै थिएन त्यै पनि लिपुलेख, कालापानि र लिम्पियाधुरा सरकारले फिर्ता ल्यायो त ।
भष्मेः	मन्त्रि ज्यु, त्यो काम त सरकारले गर्नै पर्ने थियो नि, साहासिक काम थियो समर्थन सबैले गरे, नक्सा र निसान छापमा त आयो, अब त्यस ठाँउमा रहेको इन्डियन सेना, इन्डियाले एक पछिय रूपमा सुरू गरेको सडक निर्माणको बारे केही गर्न परेन ? सशस्त्र प्रहरी मात्र नभइ , नेपालि सेनाको गण पनि पठाउन मिल्दैन ?
ओलि बाः तपाई धेरै बाठो नहुनु होस् न । विपक्षीले विरोध गर्ने अर्को बहाना पाउछ के । नक्सा निकालेर बल्ल तल्ल त महाकालि सन्धिमा आफ्नो पार्टिको पनि हात रहेको कुरा ढाक छोप गरेको छु ।
त्यही पनि फास्ट ट्याक, स्वास्थ्य उपकरण खरिद गर्ने जस्ता संवेदनशिल कार्य सरकारले गर्न नसकेपछि कस्लाई जिम्मा दिने ? स्वास्थ्य मन्त्रालयका पुर्व महानिर्देशक जस्तो सबै दोष लगाएर सरूवा गर्न मिल्ने धेरै छैनन्र के।
भष्मेः हालसालै निस्किएको बजेटमा सरकार मै पनि कत्तिको चित्त बुझेको छैन । के यस्तो समयमा जनताबाट जबरजस्ती कर उठाउनु उचित थियो ? राष्ट्रिय ढुकुटी चलाउन मिल्दैन ?
ओलि बाः राष्ट्रिय ढुकुटि चलाउन किन नमिल्नु, मज्जाले मिल्छ । तर फेरि हिसाब देखाउन पर्छ ।
त्यो भन्दा त बरू पछि वैदेशिक भ्रमणमा जान्छु , हिसाब देखाउन पनि सजिलो । स्पेन गएर मेसीलाई भेट्ने कत्रो रहर छ । मेसी नै किन भन्नु होला , इमपोर्टेन्ट कुरा मिस गर्ने र संबेदनशिल कुरामा मजाक गर्ने उहाँको बानि मसंग मिल्छ के । अझ म पनि उहाँ जस्तै फुटबल खेलाडि हो ।
भष्मेः उसोभए सबै सरकारी कर्मचारीको तलबको केहि अंश काटिदा सभासद ज्यु हरूको तलब पनि केहि कटौति गर्न सकिदैन ? सरकारको अनावश्यक खर्च कटौति गर्नै नमिल्ने छ र ?
ओलि बाः सभासदको तलब घटाउने रे ? सरकारको खर्च कटौति गर्ने रे ? अनि त थपक्क प्रधानमन्त्री पद छाडिदिए भइहाल्यो नि । पार्टि भित्रै मलाई हटाउन के के गरेका थिए , ३ ४ वटा मन्त्रालय बेचेर टिकेको छु , त्यहि त अब के बहानामा कसलाई निकालेर मिलाउने भाको बेला खर्च कटौति रे ?
बरू मलाई सहयोग गर्दिनुस त , सरकारका त्रुटि औल्याउन छाडेर , गरेका केहि राम्रा कामको तारिफ गर्दिनुस् । गाह्रो मान्न पर्दैन के , थोरै छन् , हातका औला मै अटछन् ।
तारिफ गर्ने वातावरण मिलाउन गोपनियता हक र सञ्चारको हक बाझिने विदेक संसदबाट पास गराउने तयारी छ ।
भष्मेः यि दुई हकले तारिफ गर्न कसरी रोक्यो ?
ओलि बाः जता पनि सरकारको विरूद्ध आवाज मात्र उठ्छ । एकअर्का संगको गफमा पनि विरोध गर्न नपाए त पक्कै प्रशंशा गर्छन् । हुन त नेपालि साइबर प्रणालि सुरक्षित छैन । तर मैले पढ्दा Information Technology भन्ने विषय नै थिएन र यो मेरो सरोकारको विषय पनि हैन । मलाई त सरकार विरूद्ध उठ्ने आवाज रोक्न छ ।
भष्मेः तपाईलाई तारिफ नै चाहिएको भए हाल सालै क्वारेन्टाइनमै बलत्कृत भएकि महिलालाई न्याय सुनिश्चित गर्दिनुहोस् , निर्मला हत्या काण्ड , रूकुम हत्या काण्ड जस्ता कयौँ मार्मिक घटनालाई उचित न्याय दिए पनि त तारिफ होला नि ?
ओलि बाः न्याय दिने काम सरकारको हो ? न्यायालय के का लागि ? मान्छु सरकारको दादागिरी चल्छ त्याहाँ तर पनि हामीले गर्ने काम नै हैन नि ।
त्यसमाथि पनि हाम्रो सरकार समान छ सबैको लागि । हेर्नुस हामीले गोकुल बास्कोटा , कृष्ण बहादुर महराको घटनालाइ पनि त फैसला हुन दिएका छैनौँ । यो सरकार सबैलाइ बराबर देख्छ , न्याय कसैले पाउदैन ।
भष्मेः सरकार सबैको हो भन्नु हुन्छ । फेरी वरिष्ठताको १७ औँ नम्बरमा रहेका हजुरका निजि चिकित्सक IOM को डिन हुनुभयो , हजुरकै सालो राजधानीको मेयर हुनुहुन्छ, सालि इजराइलको राजदुत । अर्थमन्त्री पनि कम हुनुहुन्न, एकातिर सरकारसंग पैसा छैन कर तिर गर्ने अर्कातिर चकलेटको भन्सार घटाइदिने । इलेक्टिक गाडिमा अनावश्क कर लगाइदिने , फेरी बजेट भाषणकै अघिल्लो रात भन्सारबाट भटाभट विद्धुतिय गाडिमात्र छुट्छन् । अनि कसरी भयो सरकार सबैको ?
ओलि बाः सरकार पो सबैको त, केपी ओलि, युवराज खतिवडा त आफ्नतको पनि त हो । यति काममा पनि लगाइदिन नसक्ने प्रधानमन्त्री पनि के प्रधानमन्त्री भन्दा चसक्क मन दुख्छ के ।
नेपालिहरु पनि गजबका छन् , ठिटा ठिटिले भने बेस्ट फ्रेन्डको नाटक देखाएर नग्न तस्बिर समेत पठाउन हुने , अर्थमन्त्री ज्युले साथिको लागी जाबो कर घटाउन नहुने ?
भष्मेः ल त्यो पनि मैले माने । तर विद्धुतिय गाडिको कर किन बढाइएको ? नेपाल विद्धुतिय इन्धनमा आत्मनिर्भर बन्न खोजेको हैन र? MCC यसैको लागि आएको हैन र? हजुर आफैले छिट्टै नेपालमा गुड्ने २० प्रतिसत गाडि विद्धुतिय हुने भनेको हैन ? अनि अहिले आएर किन १० लाखको गाडि १ अर्ब पुर्याउन लागिएको ?
ओलि बाः विचार पुर्याएर बोल्ने , कुराहरु सिलसिला बद्ध ढङ्गले गर्ने भए म प्रधानमन्त्रीका हुन्थिए ? रबि लामिछाने , राजेन्द्र बानियाँ जस्तो पत्रकार बन्थिए नि । मेरो सिद्धान्त भनेको ठुला गफ गर्ने , र आफुलाइ चित्त नबुझेको प्रश्न आए हावामा उडाइदिने हो । सरकारमा पुग्न ऋषि धमला जस्तो हुन पर्छ । उहाँलाइ हाम्रो पार्टिमा ल्याउने प्रयास जारी छ । डा. बाबुराम भट्टराई कामि यहि पार्टिमा भाको भए म एउटा मन्त्रि दिसक्थिए ।
अर्को कुरा जुन मैले अघि पनि भने हाम्रो सरकार समानतामा जोड दिन्छ । अनि नेताहरु १ करोडको गाडि चड्ने , जनता चै १० लाखको मात्रै ? यस्तो असमनता कसरि सहने?
भष्मेः प्रधानमन्त्रि ज्यु , हामी कार्यक्रमको अन्तिममा आइपुगेका छौँ । जादा जादै जनतालाइ केही भन्न चहानुहुन्छ?
ओलि बाः नेपालिहरुको दिमागले नसोचि नै कुराहरु सिधा दिलमा लिने बानि छ , कृपया यो काल्पनिक संवाद पढेर भने तेस्तो नगरिदिनु होला । टन्न बेसार खानुहोस तर कोरोना लाग्दैन भनेर मख्ख चै नपर्नु होस् । धन्यवाद